Ingunaphakade ebhaliweyo | Uncwadi lwangoku
Bathi umfanekiso uxabisa iwaka lamagama, kwaye ubukhulu becala kuyinyani… Kukho iimeko ezifakwa kwiifoto ezingenakuchazwa ngamagama… Kwaye ndigxininisa "kunzima", kodwa akunakwenzeka. Ngenxa yoko, kwiimeko ezinje, banako Yahlula ababhali abalungileyo kokubi.
Ababhali abalungileyo bayishiya imibhalo engunaphakade ... Izicatshulwa zokuba nokuba badlula kangakanani ziya kuhlala zikhunjulwa Kuba bahambisa iimvakalelo, bahambisa ubuhle, bayayazi indlela yokuzihlaziya iimeko ngokuchaneka kangangokuba nefoto ingaziva irhalela, ...
Ukuba ucinga malunga noku, uya kuza nesicatshulwa osikhumbulayo. Mhlawumbi kungenxa yokuba ikuphawule kwinqanaba elithile lobomi bakho, mhlawumbi ngenxa yokuba yabhalwa ngumbhali omthandayo. Nokuba siyintoni na isizathu, unayo le mibhalo inzulu kangaka ngaphakathi kuwe, uyikhumbule ngentloko, kangangokuba kunokuthiwa kuwe baya kuhlala ngonaphakade.
Namhlanje, ndifuna ukwabelana ngezinye (kungekhona zonke) zeetekisi zam ezingunaphakade ... Ngokuqinisekileyo abaninzi bethu bahambelana.
1 Iitekisi zam "ezingunaphakade"
1.1 Isahluko 7 se «Hopscotch», uJulio Cortázar
1.2 Rhyme XXIV "Iilwimi ezimbini ezibomvu zomlilo", uGustavo Adolfo Bécquer
1.3 Umbongo «Uthando lwam ngaphakathi», uFederico García Lorca
1.4 Qaphela kwi "Flowers for Hitler", nguLeonard Cohen ongasekhoyo
1.5 Isiqwenga "sesiqholo", nguPatrick Süskind
1.6 ICoplas ngokusweleka kukayise, uJorge Manrique
1.7 Iqhekeza le «Ukukhanya okunganyamezelekiyo kokubakhona», eMilan Kundera
Iitekisi zam "ezingunaphakade"
Isahluko 7 se «Hopscotch», uJulio Cortázar
Rhyme XXIV "Iilwimi ezimbini ezibomvu zomlilo", uGustavo Adolfo Bécquer
Iilwimi ezimbini ezibomvu zomlilo
ukuba, kwisiqu esinye esixhunyiwe,
basondela, kwaye xa bephuza
bakha idangatye elinye;
amanqaku amabini e-lute
ngaxeshanye isandla siqala,
kunye nokwamkela ngokuvumelanayo;
Amaza amabini adibana
kwaye xa bephula bathweswa isithsaba
iiwps ezimbini zomphunga
ukuba liphuma echibini
kwaye xa sidibana apho esibhakabhakeni
benza ilifu elimhlophe;
izimvo ezimbini ezihluma ngaxeshanye,
ukwanga okubini okwenzeka ngaxeshanye,
Iimpawu ezimbini ezididekileyo,
yimiphefumlo yethu emibini leyo.
Umbongo «Uthando lwam ngaphakathi», uFederico García Lorca
Uthando lwam, ukufa ixesha elide,
Ndililinde ngelizwi lakho elibhaliweyo
ndicinga ukuba, ngentyatyambo ebunayo,
ukuba ndiphila ngaphandle kwam ndifuna ukuphulukana nawe.
Umoya awufi. Ilitye le-inert
Akasazi isithunzi okanye asiphephe.
Intliziyo yangaphakathi ayifuni
nobusi obomkhenkce obuphuma enyangeni.
Kodwa ndikunyamezele. Ndikrazule imithambo yam
ingwe nehobe, esinqeni sakho
kwindawo yesibini yokulunywa kunye neenyibiba.
Gcwalisa impambano yam ngamazwi
okanye ndiyeke ndihlale ndedwa
ubusuku bomphefumlo ubumnyama ngonaphakade.
Qaphela kwi "Flowers for Hitler", nguLeonard Cohen ongasekhoyo
Kwixesha elidlulileyo le ncwadi ngeyabizwa
nangaphambi kokuba ibisabizwa
"Iindonga zeGENGHIS KHAN".
Isiqwenga "sesiqholo", nguPatrick Süskind
Kulapha, kweyona ndawo inuka kamnandi ebukumkanini bonke, apho uJean-Batiste Grenouille wazalwa ngoJulayi 17, 1738. Yayiyenye yeentsuku ezishushu kakhulu enyakeni. Ubushushu babetha phantsi njengelothe etyhidiweyo phezu kwamangcwaba kwaye banwenwela kwizitalato ezikufutshane njengenkungu ebolileyo enuka umxube weevatala ezibolileyo kunye nophondo olutshisiweyo. Xa kwaqala iintlungu zokubeleka, umama kaGrenouille wayekwivenkile yokuloba eRue aux Fers, ekhulisa izinto awayezikhuphe ngaphambili.
ICoplas ngokusweleka kukayise, uJorge Manrique
Khumbula umphefumlo olalayo
uphilisa ingqondo kwaye uvuke
ucinga ngendlela ubomi obuchithwa ngayo
kwenzeka njani ukufa,
cwaka kakhulu; ukuba luhamba ngokukhawuleza kangakanani ulonwabo,
njani, emva kokuba kuvunyelwene,
njani, ngokoluvo lwethu,
naliphi na ixesha elidlulileyo,
Iqhekeza le «Ukukhanya okunganyamezelekiyo kokubakhona», eMilan Kundera
«Ukuba ixesha ngalinye lobomi bethu liza kuphinda-phindwa amaxesha amaninzi, sibethelelwe ngonaphakade njengoYesu Krestu emnqamlezweni. Umfanekiso woyikeka. Kwilizwe lokubuya okungunaphakade, ubunzima boxanduva olunganyamezelekiyo luxhomekeke kwisenzo ngasinye. Kungenxa yoko le nto uNietzsche abiza umbono wokubuya ngonaphakade ngowona mthwalo unzima. Kodwa ukuba ukubuya ngonaphakade kungoyena mthwalo unzima, ngoko ubomi bethu bunokuvela, ngokuchasene naloo mvelaphi, kuko konke ukukhanya kwabo okumangalisayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ingunaphakade ebhaliweyo
Ndiyazi, xa ndifumana i-imeyile yesithuba esitsha seCarmen, ukuba inqaku liya kuba lilunge kakhulu, njengoko kunjalo. Ndiyabulela kakhulu ngeli nqaku lihle, ndincoma imihla ngemihla kunye noCaracas. (Okwexeshana ngoku kunye nokubhengezwa okuninzi kwiwebhu, kuyacaphukisa).
Bendithetha ukuba… kuninzi okwaziwayo… ukubulisa
UJuan Carlos Ocampo Rodriguez sitsho
Halala Inenekazi eliBekekileyo leeleta. Ukusuka kwigumbi lokuFunda (i-Pnsl) iVeracruz iminyaka engama-500, imibuliso, umbulelo, indumiso kunye nenkuthazo yemibhalo yakho.
Wamkelekile eVeracruz, Ver.
Ndiziphinda kwakhona ngembalelwano yezimvo zakho.
ULUIS ARMANDO TORRES CAMACHO sitsho
Njengokuba ndisazi ndisemncinci, kwathiwa sisithandi sobulumko saseTshayina
Phendula uLUIS ARMANDO TORRES CAMACHO